Orinasa 4 × 4 Twill Carbon Fiber ary mpamatsy | Chengyang
Lamba Fiberglass mifono silika
Lamba fibre karbona
Lamba Fiberglass PTFE
Lamba volon'oliva mifangaro polyurethane
Taratasy vita amin'ny alim-bolo vita amin'ny alimo
Lamba vita amin'ny vera vita amin'ny acrylic
Fibre karbaona 4 × 4 Twill
Carbon Fiber Twill Fabric dia karazan-tsoavaly vaovao misy tanjaka avo sy fibre modulus avo lenta miaraka amin'ny atin'ny karbaona ambonin'ny 95%.
Carbon fibre "vy ivelany malefaka ivelany", maivana ny kalitao noho ny alimika vy, fa ny hery ambony noho ny vy, ny hery dia avo 7 heny noho ny vy; ary manana fanoherana ny harafesina, toetra mampiavaka azy, dia fitaovana lehibe amin'ny fiarovana miaramila sy sivily.
Vidin'ny FOB: USD10-13 / sqm
Min.Order Quantity: 10 sqm
Fahaizana manome: 50.000 sqm isam-bolana
Manisy seranan-tsambo: Xingang, Sina
Fepetra fandoavana: L / C amin'ny fahitana, T / T, PAYPAL, UNION Andrefana
Fotoana fanaterana: 3-10 andro aorian'ny fandoavana mialoha na voamarina L / C voaray
Kitapo antsipiriany: Rakotra sarimihetsika izy io, nopetahany baoritra, napetaka tamin'ny palety na araka ny takian'ny mpanjifa
Carbon Fiber Twill Fabric dia karazan-tsoavaly vaovao misy tanjaka avo sy fibre modulus avo misy atin'ny karbôna mihoatra ny 95% .Ny fibre karbonika dia vy ivelany malefaka ivelany ", maivana kokoa noho ny alim-by vy ny kalitao, saingy ambony noho ny vy ny tanjaka, ny tanjaka dia 7 fotoana toy ny vy; ary manana fanoherana ny harafesina, toetra mampiavaka azy lehibe, dia fitaovana lehibe iray amin'ny fampiasana miaramila sy sivily fiarovana.
Karazan-damba Kofehy fanamafisana Fanisana amin'ny fibre (cm) manenona Sakany (mm) Matevina (mm) Lanja (g / ㎡)
H3K-CP200 T300-3000 5 * 5 Plain 100-3000 0,26 200
H3K-CT200 T300-3000 5 * 5 Twill 100-3000 0,26 200
H3K-CP220 T300-3000 6 * 5 Plain 100-3000 0,27 220
H3K-CS240 T300-3000 6 * 6 Satin 100-3000 0,29 240
H3K-CP240 T300-3000 6 * 6 Plain 100-3000 0.32 240
H3K-CT280 T300-3000 7 * 7 Twill 100-3000 0,26 280
1) Ny tanjaka avo, ny hakitroky ambany, ny tanjaka dia mety hahatratra 6-12 heny amin'ny vy, ny ampahefatry dia vy ampahefatry ny vy fotsiny.
2) Herin'ny havizanana be;
3) Fitoniana avo lenta;
4) Fitaovana elektrika sy hafanana tena tsara;
5) fampisehoana fanamafisana ny hovitrovitra tsara;
6) fanoherana hafanana tena tsara;
7) Ny coefficient misy ny friksi dia kely ary ny fanoherana ny akanjo dia tsara indrindra;
8) maharitra sy maharitra fiainana.
9) lehibe ny permeabilité-par-X.
10) Ny plastika tsara dia azo atao amin'ny endriny rehetra arakaraka ny endrik'ilay lasitra, mora volavolaina ary mora ny manodina azy.
Carbon Fiber Twill Fabric Ampiasaina betsaka amin'ny fitaovana fanjonoana, fitaovana fanatanjahan-tena, entana fanatanjahan-tena, aerospace ary kianja hafa, fampiasan'ny tafika ny balafomanga, balafomanga, zanabolana, radara, fiara tsy misy bala, akanjo ba bala ary vokatra miaramila lehibe hafa. Toy ny fitoeram-by, bisikileta alohan'ny bisikileta, kojakoja bisikileta, klioban'ny golf, kitapom-boankazo, baomba mandatsa-dranomandry, tehina fanjonoana, ramanavy baseball, rakotra volom-borona, fantsom-boribory, kojakoja kiraro, satroka mafy, akanjo fiarovan-tratra, fiarovan-doha, sambo, yachts , sambo sambo, takelaka fisaka, fitaovana fitsaboana, sivana fanangonana vovoka, indostrian'ny fiara (masinina) fiara, milina indostrialy, fanamafisana trano, lelan'ny rivotra, sns.
Fonosana: fanondranana entana mahazatra na fanamboarana arakaraka ny zavatra takinao.
Fanaterana: amin'ny ranomasina / amin'ny rivotra / amin'ny DHL / Fedex / UPS / TNT / EMS na fomba hafa tianao.
Previous: Lamba fibre karbaona 1k
Manaraka: Lamba vita amin'ny fibre carbon carbon
F: 1. Azoko atao ve ny maka santionany?
A: Eny, raisinay ny kaomandy santionany hitsapana sy hijerena ny kalitaony.
F: 2. Inona no fotoana itarihana?
A: Mifanaraka amin'ny volan'ny filaharana.
F: 3. Manana fetra MOQ ve ianao?
A: Manaiky baiko kely izahay.
F: 4. Ahoana ny fomba andefasanao ny entana ary haharitra hafiriana izy io?
A: Matetika alefanay amin'ny alàlan'ny DHL, UPS, FedEx na TNT. Matetika dia maharitra 3-5 andro vao tonga.
F: 5. Te hitsidika ny orinasanao izahay?
A: Tsy misy olana, orinasa mpamokatra sy fanodinana izahay, tongasoa mba hijery ny orinasanay!
Vidin'ny lamba vita amin'ny fibre karbaona
Carbon Fiber 4k
Lamba fibre karbonina tantely
Lamba Fibre Carbon Green
Mpanamboatra lamba vita amin'ny karbaona
Fampidirana lamba sy fivoarana amin'ny lamba vita amin'ny karbaona
Vokatra vaovao avy amin'ny lamba fiberglass Teflon
Tianjin Cheng Yang Vokatra mafana an'ny Silico ...
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Tips - Vokatra mafana - Sitemap
Fiberglass mifono akrilika, Lamba vita amin'ny vera vita amin'ny acrylic, Clot Fiberglass, Lamba Fiberglass Aluminized, Lamba vita amin'ny acrylic Fiberglass, Lamba lamba vita amin'ny ravin-kazo vita amin'ny kofehy,